Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguGyörgyi
Kumbindi weNagykanizsa, kwimizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wesixeko, indawo yethu yokuhlala, elungiswe ixesha elifutshane okanye elide, ifakwe ngendlela yolutsha, yanamhlanje. Ungayipakisha simahla phambi kwendlu, uya kufumana ivenkile yokutya kufutshane, kodwa ukuba uza nomntwana, akuyi kubakho ngxaki ngomdlalo, kukho nebala lokudlala elincinci ngaphakathi kokutsiba.
Ngokuphathelele idatha / amanani: amagumbi ama-2 + igumbi lokuhlambela eli-1, ibhafu + 1 yangasese + 1 ikhitshi elincinci kodwa elisebenzayo.
Ngokuphathelele idatha / amanani: amagumbi ama-2 + igumbi lokuhlambela eli-1, ibhafu + 1 yangasese + 1 ikhitshi elincinci kodwa elisebenzayo. Indawo yethu ibonelela ngendawo yokuhlala egqibeleleyo yabantu aba-4 (2 + 2), kwaye iibhedi zethu ezitofotofo zibonelela ngokuphumla okunoxolo.Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini kwaye igumbi lokuhlala linesofa enokuguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini.
Kukho isikwere esihle esisedolophini, esijikelezwe ziindawo zokutyela ezincinci kunye neekhefi. Ungahamba ngesikhephe kunye ne-pedal boating kwichibi elikufutshane lokuhamba ngesikhephe. Kukho iindawo zokudlala zabantwana ezininzi kufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Györgyi